Sɛnea Wobesiesie Adwuma Ho Nsɛm | Onyankopɔn Dɔ
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Altai American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mixe (North Central) Mizo Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vezo Wallisian Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Adwuma Ho Nsɛm a Wobesiesie
Sɛnea wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ 1 Korintofo 6:1-8 no, ɔsomafo Paulo kae sɛ Kristofo bi de wɔn yɔnko gyidifo kɔɔ asɛnnibea. Ɛhaw no sɛ Kristofo a wɔwɔ Korinto no ‘tumi sii wɔn bo kɔɔ asɛnnii wɔ nnipa a wɔnteɛ anim.’ (Nkyekyɛm 1) Paulo kyerɛɛ nea enti a ɛnsɛ sɛ Kristofo de wɔn nuanom kɔ asɛnnibea na mmom wosiesie wɔn ntam nsɛm wɔ asafo no mu no. Momma yɛnhwɛ nea enti a ɔde afotusɛm a efi honhom mu yi mae ne tebea bi a wanhyɛ da anka ho asɛm pɔtee.
Sɛ adwuma ho nsɛm bi sɔre wɔ yɛne yɛn nua gyidini ntam a, ɛsɛ sɛ yedi kan hwɛ sɛ yebesiesie asɛm no wɔ Yehowa kwan so, na ɛnyɛ yɛn kwan so. (Mmebusɛm 14:12) Sɛnea Yesu daa no adi no, ɛbɛyɛ papa sɛ yɛyɛ ntɛm siesie yɛne yɛn nuanom ntam nsɛm ansa na agye nsam. (Mateo 5:23-26) Nanso awerɛhosɛm ne sɛ Kristofo bi ma mansotwe yɛ wɔn dɛ na wɔde wɔne wɔn nuanom ntam nsɛm kɔ asɛnnibea. Paulo kae sɛ: “Nokwarem no, ɛyɛ nkogudi koraa ma mo sɛ mode mo ho mo ho bɛkɔ asɛnnii.” Adɛn ntia? Ade titiriw baako ne sɛ adeyɛ a ɛte saa bɛka din pa a asafo no wɔ ne Onyankopɔn a yɛsom no no. Enti ɛsɛ sɛ yɛma asɛm a Paulo bisae yi tena yɛn adwenem: “Adɛn na momma wɔnyɛ mo bɔne mmom?”—Nkyekyɛm 7.
Paulo kae nso sɛ Onyankopɔn ayɛ nhyehyɛe pa wɔ asafo no mu a wɔde siesie anuanom ntam nsɛm. Mpanyimfo no yɛ Kristofo mmarima a Kyerɛwnsɛm mu nimdeɛ ama wɔn nyansa, na Paulo kae sɛ wotumi ‘bu anuanom ntam atɛn wɔ asetena yi mu nneɛma ho.’ (Nkyekyɛm 3-5) Yesu kyerɛe sɛ nsɛm a anibere wom te sɛ ntwiri ne asisi sɔre a, ɛsɛ sɛ wɔfa akwan mmiɛnsa a edidi so yi so siesie: nea edi kan, ɛsɛ sɛ nnipa mmienu a asɛm wɔ wɔn ntam no bɔ mmɔden sɛ wɔn ankasa besiesie; sɛ wɔn mmienu antumi ansiesie a, nea ɛto so abien a wobetumi ayɛ ne sɛ wɔde ɔdansefo baako anaa adansefo mmienu bɛba mu; sɛ eyi nso anyɛ yiye a, nea ɛto so mmiɛnsa a wobetumi ayɛ ne sɛ wɔde asɛm no bɛkɔ akɔdan mpanyimfo a wogyina asafo no ananmu no.—Mateo 18:15-17.
Nokwarem no, mpanyimfo a Kristofo bi yɛ no nkyerɛ sɛ wonim mmara anaa adwuma ho nsɛm, enti ɛnsɛ sɛ wɔyɛ wɔn ho saa. Sɛ adwuma ho nsɛm sɔre wɔ anuanom ntam a, ɛnyɛ wɔn na ɛsɛ sɛ wɔhyɛ ho mmara ma wɔn. Mmom no, wɔboa wɔn a asɛm no fa wɔn ho no nyinaa ma wɔde Kyerɛwnsɛm no di dwuma de siesie ma asomdwoe ba. Sɛ asɛm no yɛ den ma wɔn a, wobetumi de akɔdan ɔmansin sohwɛfo anaa mpanyimfo a wɔwɔ Yehowa Adansefo adwumayɛbea no. Nanso nsɛm foforo bi wɔ hɔ a Paulo afotu no nka ho asɛm pɔtee. Eyinom bi ne dɛn?
Ɛtɔ mmere bi a, wɔde asɛm bi kɔ asɛnnibea sɛnea wɔbɛfa mmara kwan so ama asomdwoe aba kɛkɛ a adwemmɔne biara nni akyi. Sɛ nhwɛso no, tebea a edidi so yi bɛhwehwɛ sɛ obi de asɛm bi kɔ asɛnnibea: bere a obi pɛ sɛ ogyae aware mmara kwan so, bere a obi hwehwɛ tumi a ɛbɛma ne ba abedi ne nsam, bere a obi repɛ akɔnhamabɔde, bere a obi rehwehwɛ nsiakyibaa (insurance) ho sika, bere a adwuma bi abɔ fam na obi sika wom, ne bere a nsamansew ho nsɛm asɔre. Ebetumi aba sɛ obi de onua bi bɛkɔ asɛnnibea, na ebehia sɛ onua no nso de n’asɛm kɔdan asɛnnibea de twitwa gye ne ho. *
Sɛ obi de asɛm no kɔ asɛnnibea na ɛnyɛ mansotwe kɛkɛ nti na ɔyɛɛ saa a, ɛnde na ɛnto Paulo afotusɛm no. * Nanso nea ɛsɛ sɛ ɛtena Kristoni adwenem ne sɛ ɔbɛtew Yehowa din ho na waboa ma asomdwoe ne baakoyɛ atena asafo no mu. Kristofo ahyɛnsode titiriw ne ɔdɔ, na ɔdɔ nso ‘nhwehwɛ nea n’ankasa hia.’—1 Korintofo 13:4, 5; Yohane 13:34, 35.
^ nky. 2 Ebetumi aba nso sɛ Kristoni bi bɛyɛ bɔne a anibere wom atia ne yɔnko. Ebi ne mmonnaato, tow a wɔtow hyɛ obi so, awudi, anaa korɔnbɔ a anibere wom. Nsɛm a ɛtete saa mu no, ɛrento mmara sɛ onua no de asɛm no bɛkɔ akɔdan atumfoɔ, ɛwom mpo sɛ ebia saa a ɔbɛyɛ no bɛma wɔadi ɔbɔnefo no asɛm wɔ asɛnnibea deɛ.
^ nky. 3 Sɛ wopɛ sɛ wuhu pii fa saa asɛm yi ho a, yɛsrɛ wo hwɛ Ɔwɛn-Aban, March 15, 1997, kratafa 17-22, ne October 15, 1991, kratafa 25-28.